‘कालो धुवाँबाट नेपालमै बनाउन सकिन्छ मल’
प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७७, मंगलवार १२:४०
देशभर रासायनिक मलको अभाव चुलिएको बेला नेपालमै मल कारखाना खोल्ने बहस पनि चुलिएको छ । मल कारखानाको अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
भारतबाट पाइपलाइनमार्फत प्राकृतिक ग्यास ल्याएर मल कारखाना चलाउने कुरा एकथरीले गरेका छन् । तर नेपाली ऊर्जा विज्ञ भने ८ ठूला नेपाली सिमेन्ट कारखानाबाट निस्किने कालो धुवाँ र स्वदेशी बिजुलीबाटै नेपाललाई पुग्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्छन् ।
नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे ३६ वर्षअघि सन् १९८४ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले ९ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनले दुईवटा विधिमार्फत युरिया उत्पादन गर्न सकिने सिफारिस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठले बताए ।
दोस्रोे विधिः यो विधिमा बिजुली र सिमेन्ट उद्योगको कालो मुस्लो धुवाँबाट युरिया मल बनाउन सकिन्छ । यस विधिमार्फत नेपाली उद्योगले नै हरेक दिन २७५ टन युरिया मल उत्पादन गर्न सक्ने ऊर्जाविद् डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मल उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा प्राकृतिक ग्यासलाई मानिएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा नभएको उक्त ग्यासको साटोमा बिजुली र सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादन हुने कालो धुवाँ प्रमुख कच्चा पदार्थ हुनसक्ने प्रा.डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
जाइका प्रतिवेदनले एउटा आयोजनाका लागि कोइलासहित ७६.१ मेगावाट बिजुली चाहिने भने पनि पूर्णरुपमा बिजुलीबाट मल कारखाना चलाउन मोटामोटी एक सय मेगावाटले पुग्ने र यसबाट कोइला विस्थापित हुने प्रा.डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तर यसका लागि निजी क्षेत्रका उद्योगीसँग मिलेर विज्ञहरुसहित राज्यको पहलकदमी भने महत्वपूर्ण हुनु पर्ने उनी बताउँछन् । अनलाईनखबरबाट